RAHARAHA KIANJABE MAHAMASINA Fifanojoan'ny resaka no nahatonga an'i Patrick voarohirohy
Ady amin’ny haromotana Isan’ny vahaolana ny famosirana ny alika
Nanomboka omaly 28 septambra-04 oktobra ny hetsika fanentanana ny daholobe hiompy sy hanao vaksiny ny alika, ka isan’ny miantsoroka sy manome vahana izany ny Minisiteran’ny fahasalamana. Isan’ny paikady misoroka aretina maro ho an’ny alika ny famosirana azy.
Ny andro nidinan'ny elikoptera teo Mahamasina, tsy teo an-toerana i Patrick Andriamisa, tompon’andraikitry ny kianjabe Mahamasina,
raha ny filazan’ny fianakaviany fa nijery ny toerana handraisana ny papa tany Soamandrakizay. Ny alarobia mialoha io no nisy haino aman-jery nanontany azy raha misy olona hafa te hiditra eo amin'ny toerana fanaovam-baolina Mahamasina. Namaly mazava ity Tale eo anivon'ny CUA ity tamin'ny haino aman-jery fa mila fankatoavan'ny mpanolotsaina ny tanànan'Antananarivo fa tsy izy na ny Ben'ny tanàna no mahatapaka izany.
Nandeha mantsy ny feo fa ny alarobia mialoha io no nisy teratany vahiny nijery ifotony ny mety ho fanamboarana ny kianja. Ny zoma no tonga tampoka ilay angidimby ka nisy nanely tamin'ny tambajotran-tserasera fa mety tohin'ilay resabe nandeha ny alarobia teo. Voaantso ho ao Mahamasina io Tale eo anivon'ny CUA io ny sabotsy ary tonga dia lasa teny amin'ny polisy Anosy, araka ny fampitam-baovaon'ny fianakaviany. Niakatra fampanoavana omaly izy sy ny mpanao gazety telo. Araka ny fampitam-baovao ofisialy anefa elikoptera nanatanteraka andrana fiantsoana amin'ny fahatongavan'ny Papa ray Masina no teny Mahamasina.